ရေချိုးရင်း ရှူးပေါက်ချရင် ရလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးရလာဒ် ဘာတွေဖြစ်မလဲ -
ရေချိုးရင်း ရှူးပေါက်ချရင် ရလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးရလာဒ် ဘာတွေဖြစ်မလဲ
By : Aung Maung
လူတော်တော်များများကတော့ ရေချိုးခန်း တဲ့ဝင်တဲ့အချိန်၊ ရေချိုးတဲ့အချိန်တွေမှာ ရှူးရှူး ပေါက် ချ လေ့ရှိကြ တယ်ဆိုတာ လိမ် ပြောလို့မရပါဘူး။
အနည်းဆုံးတော့ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်းတစ် ကြိမ်တော့ ရှူးပေါက်ချလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရေချိုး နေစဉ် အတွင်း ဆီးသွားခြင်းကနေ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အံ့သြစရာ အကျိုး တွေအကြောင်းကို ဘယ်ဆရာဝန်ကမှ မပြောပြကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရေချိုး ခန်းထဲ ရှူးပေါက်ချခြင်း ကနေ ကျွန်ုပ်တို့တွေအတွက် ထူးခြား တဲ့ ကောင်း ကျိုး တွေ ကတော့ အမှန်တကယ် ရှိနေပါတယ်….
၁။ ရေချိုးခန်း ထဲ ရှူးပေါက်ချခြင်း က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကမ္ဘာ ကြီးကို ထိန်းသိမ်း ရာ ရောက်တယ် လို့ အမေရိကန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင် ရာ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းက ဆိုထားပါတယ်။
အဓိကကတော့ ရေအရင်းမြစ်ကို ထိန်းသိမ်းတာရောက်တာပါပဲ။ ရေချိုးရင်း ဆီးသွား တာမဟုတ်ပဲ အိမ်သာ၊ သန့်စင်ခန်းမှာ သီးခြားဆီးသွားတာမျိုးအ တွက် ရေပမာဏကုန်ကျမယ့်အစား ရေချိုး လိုက် ချိန်မှာ တစ်ခါ တည်းသုံးစွဲမယ့် ရေက ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းချွေတာ အသုံးပြုပြီးသား ဖြစ်သွား တာမို့ လို့ပါပဲ။
၂။ မိမိရဲ့ဆီးတွေက ခြေလက်နဲ့ကိုယ်တွင်းတွေမှာ ပေါက်နေတဲ့အ နာတွေကို ပိုးသတ်ပေး စေနိုင်ပါ သတဲ့။ ကုတ်ခြစ်ရာလေးတွေ၊ ပိုးကောင်ကိုက်ထားတဲ့ အနာလေးတွေရဲ့ ပိုး၊ ဘက်တီးရီးယား တွေ ကို ဆီး၊ ကျင်ရည်ငယ်ကနေ ပိုးသတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ အနာကြီးကြီးမားမားဆိုရင်တော့လည်း ဆေးကုသမှုနဲ့ ဆရာဝန် သွားရောက် ပြ သသင့် လျှင် ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်။
၃။ သင့်ရဲ့အရေပြားကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်မှုအတွက် အထောက် အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ဆီမှာ နှင်းခူကဲ့သို့ အရေပြား ရောဂါရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းမှုကတော့ ဆီး၊ ကျင်ငယ်ရည်တွေပါပဲ။
ဆီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ သ ဘာဓာတ်တွေက အလှဆီ၊ အသားရေ ကျန်းမာရေး ခရင်မ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ သဘာဝဓာတ်တွေအတိုင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ ဒီ ပစ္စည်းတွေက သင့်အသားရေရဲ့ ရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး အသားရေ ခြောက်သွေ့ တာ တွေ ၊ ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားအရေတွေ အတွက်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ မှိုနဲ့ မှိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေကို ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခြေ ထောက် တွေ ၊ ခြေချောင်းတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မှို နဲ့ မှို ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အနာတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီး၊ ကျင်ငယ်ရည်ကို အဆိုပါမှိုဆွဲ၊ အနာဖြစ်နေတဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်မှာ ပုံမှန်သိုတ်လိမ်းပေးရုံနဲ့ သိသာ တဲ့ရလာဒ်နဲ့ ပျောက်ကင်းလာမှုကို မျက်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရခြေိုးရငျး ရှူးပေါကျခရြငျ ရလာမယျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးရလာဒျ ဘာတှဖွေဈမလဲ
လူတျောတျောမြားမြားကတော့ ရခြေိုးခနျး တဲ့ဝငျတဲ့အခြိနျ၊ ရခြေိုးတဲ့အခြိနျတှမှော ရှူးရှူး ပေါကျ ခြ လရှေိ့ကွ တယျဆိုတာ လိမျ ပွောလို့မရပါဘူး။
အနညျးဆုံးတော့ ရခြေိုးနစေဉျအတှငျးတဈ ကွိမျတော့ ရှူးပေါကျခလြရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ရခြေိုး နစေဉျ အတှငျး ဆီးသှားခွငျးကနေ မယုံကွညျနိုငျလောကျတဲ့ အံ့သွစရာ အကြိုး တှအေကွောငျးကို ဘယျဆရာဝနျကမှ မပွောပွကွပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ ရခြေိုး ခနျးထဲ ရှူးပေါကျခခြွငျး ကနေ ကြှနျုပျတို့တှအေတှကျ ထူးခွား တဲ့ ကောငျး ကြိုး တှေ ကတော့ အမှနျတကယျ ရှိနပေါတယျ….
၁။ ရခြေိုးခနျး ထဲ ရှူးပေါကျခခြွငျး က သဘာဝပတျဝနျးကငျြနဲ့ ကမ်ဘာ ကွီးကို ထိနျးသိမျး ရာ ရောကျတယျ လို့ အမရေိကနျ ပတျဝနျးကငျြဆိုငျ ရာ ထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့အစညျးက ဆိုထားပါတယျ။
အဓိကကတော့ ရအေရငျးမွဈကို ထိနျးသိမျးတာရောကျတာပါပဲ။ ရခြေိုးရငျး ဆီးသှား တာမဟုတျပဲ အိမျသာ၊ သနျ့စငျခနျးမှာ သီးခွားဆီးသှားတာမြိုးအ တှကျ ရပေမာဏကုနျကမြယျ့အစား ရခြေိုး လိုကျ ခြိနျမှာ တဈခါ တညျးသုံးစှဲမယျ့ ရကေ ၂၇ ရာခိုငျနှုနျးခြှတော အသုံးပွုပွီးသား ဖွဈသှား တာမို့ လို့ပါပဲ။
၂။ မိမိရဲ့ဆီးတှကေ ခွလေကျနဲ့ကိုယျတှငျးတှမှော ပေါကျနတေဲ့အ နာတှကေို ပိုးသတျပေး စနေိုငျပါ သတဲ့။ ကုတျခွဈရာလေးတှေ၊ ပိုးကောငျကိုကျထားတဲ့ အနာလေးတှရေဲ့ ပိုး၊ ဘကျတီးရီးယား တှေ ကို ဆီး၊ ကငျြရညျငယျကနေ ပိုးသတျပေးနိုငျပါတယျ။
အကယျ၍ အနာကွီးကွီးမားမားဆိုရငျတော့လညျး ဆေးကုသမှုနဲ့ ဆရာဝနျ သှားရောကျ ပွ သသငျ့ လြှငျ ပွုလုပျ သငျ့ပါတယျ။
၃။ သငျ့ရဲ့အရပွေားကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျမှုအတှကျ အထောကျ အပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ သငျ့ဆီမှာ နှငျးခူကဲ့သို့ အရပွေား ရောဂါရှိနခေဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဒီပွဿနာအတှကျ အကောငျးဆုံး ဖွရှေငျးမှုကတော့ ဆီး၊ ကငျြငယျရညျတှပေါပဲ။
ဆီးထဲမှာပါဝငျတဲ့ သ ဘာဓာတျတှကေ အလှဆီ၊ အသားရေ ကနျြးမာရေး ခရငျမျတှမှော အသုံးပွုတဲ့ သဘာဝဓာတျတှအေတိုငျးပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။
အဲ့ ဒီ ပစ်စညျးတှကေ သငျ့အသားရရေဲ့ ရဓောတျကိုထိနျးသိမျးပေးပွီး အသားရေ ခွောကျသှေ့ တာ တှေ ၊ ထိခိုကျလှယျတဲ့အသားအရတှေေ အတှကျလညျး ထိနျးသိမျးပေးနိုငျပါတယျ။
၄။ မှိုနဲ့ မှိုကွောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့ ဘကျတီးရီးယား တှကေို ဖယျရှား ပေးနိုငျပါတယျ။ ခွေ ထောကျ တှေ ၊ ခွခြေောငျးတှမှော ဖွဈပျေါတဲ့ မှို နဲ့ မှို ကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အနာတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
ဆီး၊ ကငျြငယျရညျကို အဆိုပါမှိုဆှဲ၊ အနာဖွဈနတေဲ့ နရောတဈဝိုကျမှာ ပုံမှနျသိုတျလိမျးပေးရုံနဲ့ သိသာ တဲ့ရလာဒျနဲ့ ပြောကျကငျးလာမှုကို မကျြမွငျတှနေို့ငျပါတယျ။
အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာကတခြား ထိုင်-ထ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တခြား ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်တာလိုပဲ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ရရှိစေပါတယ်။ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာကြောင့် သန်စွမ်း ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ကို မြင့်တက်စေပြီး ထိရောက်တဲ့ အောက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအား သန်စွမ်းစေခြင်း အိပ်ထမတင်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်း၊ အထူးသ ဖြင့် ရင်အုံပိုင်း၊ ပခုံးပြင်နဲ့ လက်မောင်းသားရှိ ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းကျစ် လျစ်စေပါတယ်။ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့် ရင်အုံပိုင်းရှိ အဓိက ကြွက်သားတွေကို …
လက်သည်းပေါ်က အဖြူရောင်အစက်အပျောက် ကနေ ဖော်ပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှု
လက်သည်းပေါ်က အဖြူရောင်အစက်အပျောက် ကနေ ဖော်ပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှု လက်သည်းပွင့်တယ်လို့ အခေါ်များတဲ့ လက်သည်းပေါ်မှာ အဖြူရောင် အစက်အပျောက်လေးတွေ ပေါ်ခြင်းကို အများစုကတော့ စန်းပွင့်တယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တခုခု လိုအပ်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်သည်းပွင့်ခြင်းက ဘယ်လိုမျိုး ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ (၁) လက်သည်းပွင့်ခြင်းဟာ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ Calcium Deficiency လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ထုံးဓာတ်လျော့နည်းတဲ့အခါနဲ့ ဇင့် ဓာတ်ချို့တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ …
ခံစားရခတ်တဲ့ လက်ပြင်ကြော ငုတ်လျှင် ကုသနည်း
ခံစားရခတ်တဲ့ လက်ပြင်ကြော ငုတ်လျှင် ကုသနည်း လက်ပြင်ကြော ငုတ်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ လက်ပြင်ကြော ငုတ်ခြင်းအတွက် ကတော့ မိမိရဲ့ ဝေဒနာ အပြင်းအနိမ့် ပေါ်မူတည်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ခန်း အဖိ အဖော့ကို လုပ်ကြည့်ရမှာပါ။ ဖြစ်နေတဲ့ လက်ကို ကြက်တောင်ပံ ပုံသဏ္ဍာန် ခပ်ကွေးကွေးလေး လုပ်ပါ။ (၁) ကြက်တောင်ပံ ခတ်သလို ညင်ညင်သာသာ အထက် နှင့် အောက် ခတ်ပါ။ (၂) ကြက်တောင်ပံ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း လက်ကို ဘေးဘက်သို့ တန်း၍ ပုခုံးဖြင့် တတန်းတည်း ကပ်ထား၍၊ ပုခုံး တစ်ခုတည်းကိုသာ အနောက်မှ အရှေ့သို့ ခပ်ဖြည်းဖြည်း စက်ဝိုင်း လှည့်ပေးပါ။ (၃) …
ထောင်ကပြန် လွတ်လာတဲ့အထိ သစ္စာရှိရှိ စောင့်ပေးတဲ့ ချစ်သူအကြောင်းပြောပြ လာတဲ့ မိုးအောင်ရင်
ကွတ်ခိုင်မြို့ကို လက်နက်ကြီးများနှင့် တိုက်ခိုက်ဖို့လာတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့ အကျ အဆုံး များ စွာဖြင့်ထွက်ပြေးနေရ
ကျဆုံးသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေအတွက် အားပေး လှူတန်းမှုတစ်ခု ပြုလုပ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ အေသွေး
ရဟန်း သံဃာတော်တွေ ဘယ်ဘက်ပုခုံး မှာ သင်္ကန်းတော်ကို ဖုံးလွှမ်းရတဲ့ အကြောင်း အရင်း
This Month : 13744
This Year : 158508
Total Users : 158508
Total views : 475565